अधिक मूल्यको सेयर किन्दा धेरैपटक सोच्ने गर्नुस् | Suvadin !
बजारमा अधिक मूल्यको सेयर किन्दा धेरैपटक सोच्ने गर्नुस्। किन्ने बेलामा भोलि घट्छ भन्ने मनमा लिनुस्। बढे त ठिक छ घटेमा कतिसम्म घटे थाम्न सकिन्छ त्यसको हिसाब गर्नुस्। एउटा उदाहरणले केही सहज होला। अहिले सिद्धार्थ बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७७ करोड छ। आगामी २०७४ असार भनिए पनि २०७५ पुस महिनासम्ममा यसले अाठ अर्बको वासलात देखाउनुपर्छ। यसको लागि बैंकले पूँजी बृद्धिको लागि अघि सारेको योजना अनुसार लगानीलाई तालमेल मिलाउनुस्।
Jan 17, 2017 11:51
नेपाल स्टक एक्चेञ्ज।
सेयरमा गरिने लगानीमा अत्यधिक जोखिम सँगसँगै नाफा पनि छ। नाफाभन्दा जोखिमको भार बढी हुन्छ। किनेर बेच्न नजान्दा घाटा खान कतिबेर लाग्दैन। झन् त्यसमाथि आफूले किनेपछि ‘अन्डर प्राइस’ सेयर भन्दै प्रचार गर्नेको कमी छैन। यस्ता प्रचारक सबभन्दा बढी घातक हुन्छन्। यिनीहरू त्यतिन्जेल अन्डर प्राइस भनिरहन्छन् जतिन्जेल यिनको हातमा सेयर हुन्छ। जब यिनले सेयर बेच्छन् तब यिनै महानुभाव ‘ओभर प्राइस’ भन्दै अर्को डंका पिट्छन्। सेयरमा घाटा नखाने हो भने आफैंले कम्पनीको सामान्य जानकारी लिने प्रयास गर्नुपर्छ। यति गर्न कुनै गाह्रो छैन। केही सामान्य अंकगणित बुझे पुग्छ।
हाम्रो सेयर बजार भित्री कारोबारले ग्रस्त छ। नियमन गर्नुपर्नेले नियमन नगरिदिँदा भित्री कारोबार चरमचुलीमा पुगेको छ। अहिले देखिएका कम्पनीका भाउ अधिकांश भित्री कारोबारले बढेको हो। सिद्धान्तत: सेयरको भाउ बजारले निर्धारण गर्ने भनिए पनि भित्री कारोबारले निर्धारण गरिरहेको छ। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सेयर बजारमा भित्री कारोबार गर्न छुट छ। अन्य कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने लगानीकर्ताको संघ र लगानीकर्ता भनिनेहरू भित्री कारोबार निषेध गर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ भन्न जाँदैनन्।
भित्री कारोबार गरेकै कारण गोल्डम्यान स्याक्स नामक अमेरिकन कम्पनीका भारतीय मूलका अमेरिकन नागरिक रजत गुप्ता सदाको लागि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक र पदाधिकारी नै बन्न नपाउने गरी प्रतिबन्धमा परे। अर्का राजारत्नम भन्ने व्यक्ति ११ वर्षको जेल सजाय भोग्दै छन्। यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन् तर नेपालमा यी कुरा किन लागू गर्न आवाज उठ्दैन?
बजारमा अधिक मूल्यको सेयर किन्दा धेरैपटक सोच्ने गर्नुस्। किन्ने बेलामा भोलि घट्छ भन्ने मनमा लिनुस्। बढे त ठिक छ घटेमा कतिसम्म घटे थाम्न सकिन्छ त्यसको हिसाब गर्नुस्। एउटा उदाहरणले केही सहज होला।
अहिले सिद्धार्थ बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७७ करोड छ। आगामी २०७४ असार भनिए पनि २०७५ पुस महिनासम्ममा यसले अाठ अर्बको वासलात देखाउनुपर्छ। यसको लागि बैंकले पूँजी बृद्धिको लागि अघि सारेको योजना अनुसार लगानीलाई तालमेल मिलाउनुस्।
अहिलेको चुक्ता पूँजी : ३ अर्ब ७७ करोड (त्यसपछिको अंक लिइएको छैन)
३९% बोनसपछि : ५ अर्ब २४ करोड
बोनसपछि कायम पूँजीपछि ३०% हकप्रदपछि कायम हुने पूँजी : ६ अर्ब ८१ करोड
नपुग पूँजी : १ अर्ब १८ करोड
नपुग पूँजीको लागि आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को आम्दानीबाट करिब १५% बोनस जारी गर्नुपर्ने।
अहिलेको बजार मूल्य सरदर १ हजार मान्दा तपाईको लागत कति पर्ला हिसाब गरेर हेरौं। मानौं तपाईंले १ हजारमा १०० कित्ता शेयर किन्दा पर्ने मूल्य १ लाख (अन्य लाग्ने शुल्कबाहेक) पर्छ। ३९% बोनस सेयरपछि मूल्य समायोजन हुँदा यसको लागत ७१९ पर्छ। तपाईंसँग १३९ कित्ता हुन्छ। अब १३९ कित्ताको ३०% हकप्रद पनि लिनु भो भने तपाईंले ४२ कित्ता पाउनुहुन्छ र यसको लागि तपाईंले ४२०० थप्नुपर्छ। अब तपाईंको कुल लगानी १ लाख ४ हजार दुई सय हुन्छ। यति गरेपछि तपाईंसँग १८१ कित्ता सेयर हुन्छ र यसको लागत मूल्य ५७५ पर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को आम्दानीबाट करिब १५% बोनस जारी गरेमा तपाईंले थप २७ कित्ता सेयर पनि पाउनुहुन्छ। आउँदो यही बेलामा तपाईंको हातमा २०८ कित्ता सेयर कायम हुन आउँछ। यतिबेला तपाईंको लागत ५०१ पर्न आउँछ।
तर, सोच्नुस् आर्थिक वर्ष २९७४/२०७५ मा अहिलेजत्तिकै आम्दानी गर्न सक्ला कि नसक्ला त्यसको लागि हरेक तीन/तीन महिनामा प्रकाशन हुने वित्तीय विवरण हेर्न नभुल्नुहोला।
हकप्रद सेयरपछि कायम हुने ६ अर्ब ८१ करोडबाट १५% बोनस दिनको लागि १ अर्ब १८ करोड चाहिन्छ। गत आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा १ अर्ब २४ करोड खुद नाफा गरेको छ।।
आम्दानी हेर्दा मुख्य व्यवसायबाट कति कमाएको छ त्यो अनिवार्य हेर्नुहोला। बैंकको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको कर्जा लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज हो। अन्य आम्दानी सहायक मात्र हो। ब्याज आम्दानी बढ्न लगानी बढ्नुपर्छ, लगानी बढ्न निक्षेप बढ्नुपर्छ। निक्षेप बढे नबढेको र लगानी पनि बढे नबढेको अवश्य हेर्नुहोला।
कसैले बजार भाउ बढ्छ भनेकै भरमा लगानी नहाल्नुस्। कम्पनीले दिने प्रतिफल र लागतको हिसाब गर्नुहोला यसो गर्दा तपाईंको लगानी फस्दैन। कुनै सेयर गुरु, बजार गुरु, मार्केट गुरु र प्राविधिक विश्लेषकको अफवाहको पछि नलाग्नुस्। यी सबै तपाईंलाई भडखालोमा हाल्न प्रयास गर्नेहरू हुन्।